musha Europe Akasanganiswa Maartist Conor MacGregor Childhood Indaba pamwe Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yese yevashandi vanovhengana nevarwi nevarwi vanozivikanwa nezita rezita rezita "The chazezesa".
Yedu Conor MacGregor Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeanozivikanwa ezviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino. Kuongorora kwacho kunosanganisira nyaya yehupenyu hwake musati mazita uye mhuri yake kumashure. Zvikuru saka, mazhinji OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevanonyanya kuzivikanwa vatambi vemitambo yenguva yake. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Conor MacGregor's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Conor MacGregor Nyaya Yehucheche - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Conor Anthony McGregor akazvarwa musi we 14th waJuly 1998 kuCrumlin muDublin, Ireland.
Akanga ari iye oga mwanakomana akaberekwa naamai vake Margaret McGregor uye kuna baba vake Tony McGregor (Taxi Driver panguva iyoyo).
Kufanana naJohn Cena, kuberekwa kwecheche Conor kwaive chimwe chezviitiko zvisingawanzoitika. Zvisinei, nyaya yaConor yakanga isingawanzo kuve nematambudziko ekuberekwa sezvo iye aingozvarwa aine chibhakera chakakoshwa. Zvinoenderana nababa vake Tony:
“Zvibhakera zvake zvaive zvakakombama zvichibuda muchibereko kunge aive akagadzirira kurwa. Nyamukuta vakati, 'Uyu achazova mutambi wetsiva!'
Kwaive kuzvarwa kuri nyore sezvo Margaret aive achisununguka kweawa imwe chete nekuti Conor anga achimhanyisa kuti azvizivise. ”
Wechidiki Conor akakurira pamwe nevakoma vake vakuru Aoife naErin kuCrumlin, dunhu reDublin iro rinozivikanwa zvakanyanya nekuratidzira chipatara chikuru chevana muIreland; Yedu Mukadzi Yevana Chipatara Crumlin.
Yakanga ichingova nyaya yemakore chiziviso chekuporofita nyamukuta chisati chazadzikiswa muConor uyo akasanganisa shungu dzehucheche dzemubatanidzwa wenhabvu (akatambawo Lourdes Celtic Nhabvu Club) nebhokisi kuCrumlin Boxing Club paakanga akura 12.
Conor MacGregor Dzidzo:
Conor aiva nedzidzo yake yekutanga uye yekondari pane imwe nzvimbo yekuImeri yekuImeriya inonzi Coláiste de híde muTallaght Dublin.
Muna 2005, akabatana nemhuri yake kutamira kuLucan muDublin. Kufamba hakuna kuenda pasi zvakanaka naConor akapihwa chokwadi chekuti shamwari dzake dzekare dzehudiki dzaive kuCrumlin uye akange asina hurongwa hwekuita shamwari nyowani.
"Tainzwa sekunge takange taenda kune" dhongi rekuseri kwenzvimbo ". Ini zvechokwadi handina kuibata (inofamba imba) mushe. Ini ndakazopedzisira ndadaro. Asi panguva iyoyo, ndakanga ndiine chigumbu chakanyanya kumhuri yangu. Ndakanga ndanyatsotsamwa kwenguva yakareba. ”
Akayeuka Konor wekubuda.
Paive paLucan apo Conor akapedza chikoro chesekondari kuGaelcholáiste Coláiste Cois Life mushure mezvo akatanga kudzidzira pombi dzemvura.
Conor zvakare akatora nguva yekuita shamwari nyowani dzinozivikanwa pakati pawo aive Tom Egan, wechidiki anozvifarira, akagovana shungu imwechete yekukwikwidza kurwa. Izvo hazvina kutora nguva refu kuda kusati kwaona shamwari dzese dziri mbiri dzichitanga kudzidziswa mune yakasanganiswa martial arts (MMA).
Conor MacGregor Biography Chokwadi - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira:
Mushure mekuita nhevedzano yekudzidziswa muMMA, anodakadza Conor mumakore ake ekupedzisira makumi maviri, akasangana nemurairidzi wake wazvino, John Kavanagh nenzira isingafadzi mushure mekuita nekurova varwi vaviri munzvimbo yekurovedza yeKavanagh.
Iyo show-off iyo Conor yaiitwa pasi pechirevo chekuti sparring haina kuenda pasi zvakanaka naKavanagh uyo akapindura nekupinha Conor pasi nekurova kwakakura kusvikira iye akarohwa wechidiki akavimbisa kuti haana kuuya kuzorwa nemugwagwa asi kuzodzidzisa.
Saka zvakatanga izvo zvino zvinofungidzirwa seyakareba hukama hwekushanda pakati peConor nemusoro wake murairidzi Cavanagh.
Mushure mokunge Cavanagh apinda mumufananidzo, rudo rwaConor rweMMA haruna ruzivo. Mudzidzi weplumber anga achida kuudza chero munhu ane hanya nekuteerera kuti aive shasha yeUFC mukugadzira. Mwedzi yakati wandei, Conor akatora danho rakashinga rekupomba pombi dzemvura kuti adzidzise yakazara.
Iyi sarudzo haina kubvumidzwa nababa vaConor avo vasina kuona ramangwana remwanakomana wavo muMMA.
“Unozodemba kana ndazoita mamioneya. Ndichava muremiyoni akazvigadzira pazera remakore makumi maviri nemashanu ”
Conor akayeuka achiudza baba vake.
Conor MacGregor Bio - Simuka Mukurumbira:
Conor aiva mumwechete uyo akanga ane ushingi hwekutenda kwake uye akanga akatsunga kuita hupenyu hwegodo kubva muMMA. Akaita chikwata chake cheMMA kutanga munaChitatu 2008 sechinhu chisingaregi kukunda Gary Morris.
Akazotevera kumurova akamuona akarasikirwa nekaviri kekutanga kurwa nhanhatu asati abvisa inonakidza yekuhwina streak iyo yakamugonesa kuhwina vese featherweight uye lightweight mukwikwidzi pakati pe2011 ne2012.
Iyo feat yakamuita iye wekutanga nyanzvi yeEuropean kubata mazita muzvikamu zviviri panguva imwe chete pamwe nekumuchengetera kunyorera kurwa kwake kwekutanga neUltimate Fighting Championship (UFC).
Conor akaita hutungamiri hweUFC kutanga naMarcus Brimage muna April 2013 kukunda nekugogodza mumutambo wokutanga. Mukutanga kukunda kwakaita kuti vazhinji vave kusanganisira mutungamiri weUFC Dana White uyo akati:
“Chekutanga, kurwa kwake kwekutanga akambove muUFC. Afamba akabuda manheru ano ndokupinda muoctagon senge yaive ka100 yake kurwa muUFC. "
Dee Devlin ndiani? Conor MacGregor Wife:
Conor ave ari hukama hwenguva refu nemusikana wake Dee Devlin.
Doo yakasangana mu2008 apo Conor ainge achikwanisa kuwana mukurumbira uye akaramba akabatana kubva kare.
"Musikana wangu akashanda nesimba makore ese uye akaramba ari pandiri kana ndisina kana chinhu."
Zvakazarurirwa Conor zvekunakidza kwake.
Kunyangwe ivo vasati varoora, Delvin akamisa nzvimbo yake muhupenyu hwake nekutakura mwana wekutanga waConor nemwanakomana, Conor Jack McGregor Jr (akazvarwa musi wa5 Chivabvu 2017).
Conor MacGregor Hupenyu Hwemhuri:
Conor akaberekerwa mumhuri ye5. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yake.
Nezve amai vaConor MacGregor:
Amai vaConor, Margaret McGregor akasangana nababa vake Tony muDublin vachiri vadiki uye vakaroora panguva yavo yekutanga makumi maviri. Makore makumi matatu nemashanu gare gare, Tony akataura nezve izvo zvakamukwezva kuna Margaret nenzira inotevera:
“Kwaive kutaridzika kwake kwakandikwezva sezvo anga asiri shiri yakaipa. Margaret aive akanaka uye achiri kudaro. Iye mukadzi ane rupo kwazvo uye muteereri akanaka uye ane hunhu hukuru. ”
Margareth anogovera chisungo chakasimba nemwanakomana wake mumwe chete Connor. Muchokwadi, anomurondedzera se "mukomana waamai" achiwedzera kuti ane hunhu hunodiwa kusanganisira kutendeseka.
Nezve Conor MacGregor Baba:
Baba vaConor, Tony MacGregor akaberekerwa muLiverpool, England mushure meizvozvo vabereki vake vakatamira kuDublin Ireland.
Tony anga agara achida kuti Conor ave pombi, chiitiko chakamuita kuti anetsane nemwanakomana wake pamusoro pesarudzo yake yekuve musanganiswa wemauto. Nekudaro, iye zvino ave mutsigiri anoshinga uye anodada neyakaomeswa basa nemwanakomana wake '.
“Inogona kunge iri chitima chaibuda mumugero, asi handina kuzviona. Ini handina kubvuma basa raConor pakutanga, nekuti ini ndaisatomboona iro basa mariri, asi ini ndiri bhodhi mubhodhi izvozvi uye ndanga ndiri kubvira pamberi peUFC. Akakwanisa kundiratidza zvisiri izvo, izvo zvakaita kuti ndidade. ”
Akabvuma makore akazotevera.
Tony Macgregor zvakare ndibaba vaTony Sisters Aoife naErin.
Conor MacGregor Biography - Zvimwe Pane Hupenyu Hwemhuri:
Nezvevanin'ina vake: Connor akabatana neshamwari yakasimba nevasisita vake vane rudo Erin naAoife.
Erin mugadziri wevhudzi pamwe chete nebhikini uye yemhando yekusimbisa. Iye zvakare ndiye shasha yekuumba chimiro chaConor, chiitiko chaanofarira uye akambozarura panguva yekubvunzurudzwa naye The Sunday World:
“Wese munhu anoda vhudzi raConor uye varume vazhinji vanorida. Zvinonakidza uye zvakanaka kuti ndikwanise kuratidza hunyanzvi hwangu kuburikidza naye ”.
Mukuru wemhuri zvakare akataura kuti hanzvadzi yake yave iri kukurudzira kwaari, achiwedzera kuti ivo vose vanobatsirana panguva dzekutambudzika.
Aoife, kune rumwe rutivi, inoshanda kune imwe kambani yekugadzira mari muDublin. Ndiye mutsigiri mukuru wehanzvadzi yake uye nguva dzose anoisa basa rake kubata apo Conor ane hondo huru kuuya.
Conor MacGregor Tattoo Chokwadi:
Conor ine maina mana akatanhamara. Tinokuunzira rondedzero yezvakaita hunyanzvi hwemuviri uye pfungwa shure kwavo.
Kutanga nebhokisi rake chiratidzo che gorilla rakapfeka korona uye rakabata moyo mumuromo maro. Conor akawana iyo tattoo iyo inokanganisa pachiratidzo chemurairidzi Kavanagh's Straight Blast Gym nekuti anofarira nzira yaanotaridzika.
Achienderera padumbu rake izita rake uye pasi payo iri Tiger iyo Conor anoti anofarira nekuti Tiger imhuka dzakashinga. Akawedzera zvakare kuti anonakidzwa nehunyanzvi nzira yekufamba kwemhuka pakuvhima uye inosanganisa iyo mukudzidziswa kwake.
Pamberi pake pane gwenzi remaruva rine chirevo chinoti "inononoka kutsetseka, inotsvedza inokurumidza". Chirevo chinoshandiswa mukudzidzira pfuti kwemauto epamusoro emauto kunyanya maNavy SEAL.
Conor MacGregor Kuzvininipisa kutanga:
Connor akatanga kushanda semupombi, achishanda maawa gumi nemaviri pazuva kuti awane raramo uye achishandisa yasara nguva yezuva kuti adzidzise mune yakasanganiswa netsiva.
Makore mushure mekusimuka kwake kuti ave nemukurumbira, akakwevera kune izvo kwaanotsanangura sekutanga kwake kuzvininipisa nekuwana chess seti yakagadzirwa kubva ku plumbers zvigadzirwa. Iyo yekuwana inomurangarira iye wemidzi yake apo iye achiratidzira pane izvo zvazvino kuwana.
Conor MacGregor Kurwiswa uye Kusungwa:
Muna 2018, Conor kwenguva yakareba yekusaita muoctagon yakakurudzira Mutungamiri weUFC, Dana White kuti vamubvise mazita ake. Uye zvakare, Dana akazivisa kuti bhavhuro raApril 2018 pakati paMax Holloway naKhabib Nurmagomedov raizove remakwikwi asina kuremerwa (zita riri kubatwa naConnor).
Akatsamwiswa nekuvandudzwa, Conor akapindura ne tweet yaiti, "Hapana chamunondibvisa." Akafananidza tweet yake nechiito nekuratidzira pamwe nevekupinda panoperera musangano wenhau wakaitwa mazuva maviri pamberi pechiitiko cheUFC 223 kuBarclays Center muBrooklyn, New York
Yakanga iri kuCentre iyo Conor akakanganisa nekukanda rori yeruoko mubhazi rine varwi veUFC, vachikuvadza vaviri mukuita.
Nguva pfupi gare gare, murwi weIrish akaedza kururamisa zviito zvake kuburikidza nemeseji kuna Dana, achitaura nezveropa rakaipa pakati pemisasa yake neNurmagomedov. Akazvishandurawo kuenda kuNYPD iyo yakamusunga ndokumupomera mhosva nhatu dzekurova uye imwe yehuipi hwematsotsi.
Conor MacGregor Chokwadi cheMunhu:
Conor murume ane rupo uyo anonzwa kudiwa kwekurega vanhu vakamukomberedza vachitora rombo rake rakanaka. Akarondedzerwa nevakawanda, kuva akatendeseka, uye ane hunhu hunoyemurika hwekuzvininipisa mukukundwa.
Kunyanya zvakadaro, anonzwa kudiwa kwekugara achirangarira midzi yake uye kushandisa nguva yakanaka nemhuri yake kunyanya mwanakomana wake Conor Jack McGregor Jr.
Conor MacGregor Chokwadi:
Conor akambodzidziswa ne Christiano Ronaldo mu 2016 pavanenge vachigadzirira kudzoka muUFC 202.
Kubwinya kwake kwakanyanya kudarika kunyoresa muUFC kwaive kushamisa kwe13 kwechipiri kukundwa kwaJose Aldo nehomwe imwe.
Anoramba kuratidzika na Muhammad Ali achicherechedza kuti haana nzvimbo iri pedo nemubheki mukuru kune nguva dzose.
Conor yakakundwa ne Floyd Mayweather apo paakaita bhizimisi rake rechikwata chekutanga mu2017
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Conor MacGregor Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!